यस्ताे छ प्रहरीकाे बाइक पछाडी दुई युवतीलाई राखेर गुडाएको भाइरल तस्वीरकाे वास्तविकता? - Kantipath.com
समाजिक संजालमा भाइरल भएको नेपाल प्रहरीको एक जवानले पछाडी दुई युवतीलाई राखेर गुडाएको देखिएको तस्वीरमा नानाथरिका टिकाटिप्पणीहरु भइरहेको बेला छ । यो तस्विर राजविराजको हनुमाननगरस्थित लिएको तस्विर हो ।
सिरहाका एक युवकले लिएको यो तस्विरमा हेर्दा एक युवकले दुई युवतिलाई सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी त्यसमाथि पनि नेपाल प्रहरीको गाडिमा तीन जना सवार गरी चलाएको देखिन्छ ।
पोलिसको गाडीमा दुई “युवति” बसेको भन्दै नाकारात्मक टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । तस्विर खिच्ने युवकका अनुसार, अगाडी बसेका प्रहरीका कर्मचारीहरु रहेकाे दाबी गरेका छन् ।
त्यसमाथि पनि अन्य सर्वसाधारणको हकमा लागु हुने ट्राफिक नियम नेपाल प्रहरीको गाडीमा लागु हुने की नाई ? भनेर प्रश्न पनि तेर्साएको छ । एक मोटरसाईकलमा तीन जना बस्न नहुने कानुन हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीले नै तीन जना बसेर सवारी चलाउँदा नियम कानुन मात्र सर्वसाधारणको लागि भएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय कँचनपुर सप्तरीको यो सेतो प्लेटको नेपाल पुलिसको सवारी र त्यसमा दुई युवतिसहित नेपाल प्रहरीको जवान सवार तस्विरको बारे बुझ्न खाेख्दा इलाका प्रहरी कार्यालय कँचनपुर सप्तरीका डिएसपी लोकनाथ तिमिल्सीनाले तस्विरमा देखिएको दृश्य आफूलाई पनि प्राप्त भएको भन्दै वास्तविकता बेग्लै रहेको दाबी गरेका छन् ।
डिएसपी तिमिल्सीनाका अनुसार, केहीदिन देखि सप्तरीको हनुमाननगर बस्ने एक महिला (किशोरी) केही दिनदेखि हराइरहेको अवस्थामा परिवारजनले खोजतलासको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कँचनपुरमा निवेदन दिएको थियो ।
सोही खोजतलासको क्रममा विराटनर, जनकपुर, धरान, काठमान्डौँ लगायत अन्य विभिन्न शहरहरुमा खोजतलास गर्ने क्रममा काठमान्डौंमा भेटाएको दाबी डिएसपीको छ । उनका अनुसार, भेटाएपछि उनलाई ल्याउने क्रममा लिएको तस्विर हो ।
महिलाको मानसिक स्थिति आत्तिएको अवस्थामा भएकोले उनको एक जना आफन्तलाई लिएर उनलाई ईलाका प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने क्रममा तस्विर खिचिएको बताइएको छ ।
एक्लै गाडीमा हुँदा भाग्न सक्ने वा प्रयास गर्ने हुन सक्ने अनुमान गर्दै उनको एक आफन्तलाईसँगै ल्याएको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, डिएसपीले महिलाको नाम भने गोप्य राखिएको बताउँदै उनलाई अहिले सेफ हाउमा राखिएको जानकारी दिए ।
Previous Previous post: माओवादी सांसदलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्दी बनाईएको खुलासा
Next Next post: एमाले बैठकमा ७० केन्द्रिय सदस्य उपस्थित : सुरेन्द्र र योगेश आएनन !
धान दिवसः कतै रोपाइँ कतै छाडा पशु लखेट्दै ठिक्क
कुलमान घिसिङका पिताको निधन
कञ्चनपुरको बेल्डाँडी एमाले विजयी !